Sideed Ula socotaa Baraha Bulshada? | Martech Zone
Sideed Ula socotaa Baraha Bulshada?
Isniin, February 21, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Haddii aad runti kaqaybqaadanayso iyo inkale, waxaa jira dhowr sababood oo lagula socdo warbaahinta bulshada warshad kasta maalmahan:
La socodka warshadahaaga ayaa kaa caawin kara adiga iyo shaqaalahaaga inaad heshaan khibrad.
Lasocodka kuwa kula tartamaya waxay kaa caawin kartaa inaad ururiso sirdoonka tartanka waxayna kaa caawin kartaa inaad kala garato ganacsigaaga ama badeecadaada.
Kormeerku wuxuu kaa caawin karaa inaad aqoonsato hoggaamiyeyaasha iyo goobaha leh awoodda iyo saamaynta warshadahaaga.
Kormeerku wuxuu kaa caawin karaa inaad hesho dhacdooyin khuseeya si aad uga qaybgasho (ka soo qaybgal ama u hadal).
Dabcan, kormeerku wuxuu kaa caawin doonaa inaad hesho xusuusinta meheraddaada si aad u qiimeyso dareenka, kor ugu qaaddo markhaatiyada / sheegashada macaamiisha.
Kormeerku wuxuu kaa caawin doonaa inaad aqoonsato arrimaha khuseeya adeegga macaamiisha si aad ugu xalliso dadweynaha - ama ku siiso macluumaadka aad u baahan tahay si aad u horumariso alaabadaada ama adeeggaaga.
Kormeerka ayaa ku siin doona fursado aad kudarsato qiimaha wadahadalka.
DK New Media waxay u soo bandhigtay macaamiisheeda adeegga kormeerka warbaahinta bulshada iyada oo ah qiime-ku darsiga cilaaqaadyadeena jira. Haddii aad xiisaynayso inaad siiso tijaabo-wadis, fadlan ii soo sheeg. Waxaan ku siineynaa adeegga $ 499 sanadkiiba shirkad kasta (illaa 5 logins) oo aan ahayn macaamiisheena.
Dhibaato ayaan kala kulmay helitaanka guuleystayaasheena $ 10,000… waxay umuuqataa in dadku ay aad ugu mashquulsanyihiin aqrinta emayllada si dhab ah aan uga jawaabo! Marka - waxaan sameyn doonnaa waxyaabo xoogaa ka duwan si aan u siino qalabkayaga! Vontoo waa a adeegga farriinta codka taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad si otomaatig ah u duubto oo aad u dirto xusuusiyeyaasha, ogeysiisyada aruurinta, macaamiishaada. Labada qof ee ugu horeeya ee laga yaabo inay u arkaan in adeegani waxtar leeyahay ay ku guuleysan doonaan koontada suuqgeynta codka ee xirfadleyda ah !!! Ku soo jawaab emaylkan Vontoo! cinwaanka cinwaanka ah oo noo sheeg sida aad u isticmaali doontid arjiga - Waxaan u oggolaan doonnaa dadka jooga Vontoo inay doortaan kuwa guuleysta.
5 dhaqamada taleefanka ganacsiga oo waxyeeleeya sumaddaada
PPC ka soo horjeedka SEO: Spy vs. Spy